Taariikhda Cayaaryahanka Samuel Eto'o - BBC Somali
Taariikhda Cayaaryahanka Samuel Eto'o
Sanadka 2010, Samuel Eto'o waxaa uu dhidibbada u sii aastay booskiisa ciyaarta kubbadda cagta isagoo markii 3aad u ciyaarayay kooxda ku guulaysatay horyaalka Yurub.
Kaddib markii uu u saftay kooxda Barcelona guulihii ay gaartay sannadihii 2006 iyo 2009, guusha ciyaartoygaas reer Cameroon uu la soo hooyay kooxda Talyaaniga ee Inter Milan waxaa macnaheedu ahaa inay u suurta gashay inuu kooxo kala duwan kula guulaysto koobabka horyaalka Yurub.
Eto'o Armaajadiisa koobabka ka buuxa way sii kordhayaan kaddib markii uu diiwaan geliyay horyaalka Yurub, horyaal iyo saddex koob oo kooxda Inter ay qaadday 12 bilood uun kaddib markii uu sidaas oo kale u sameeyay kooxda Barcelona, ciyaartoyga reer Cameroon waxaa uu noqonayaa laacibkii ugu horreeyay ee abid guushaas gaara.
Eto'o waxaa uu soo bandhigay qoto dheerida ciyaartiisa kubadda cagta isagoo door muhiim ah ka qaatay boos aan caadi ahayn ee weerarka baalasha, halkaas oo uu ka dhaliyay goolkii aadka loogu baahnaa ee kooxda Chelsea ka reebay horyaalka Yurub bishii March.
Kaddib markii tababare Rafael Benitez uu tababaranimada kooxda Inter ka beddelay Jose Mourinho, laacibka reer Cameroon waxaa uu ka faa'iidaystay labo waxyaabood oo kala ah: qaab ciyaareedka cadaadiska ku dhisan ee tababaraha reer Spain Benitez iyo dhaawac gaaray laacibka Diego Milito. Ciyaartoyga reer Argentin ee Milito waxaa uu ahaa ninka uu ugu jecel yahay tababare Mourinho inuu weerarka ka ciyaaro laakiin Eto'o waxaa uu muujiyay waxa uu sameyn karo marka uu maqan yahay Milito.
Waxaa uu hoggaanka u qabtay gool dhalinta horyaalka Yurub isagoo toddoba gool dhaliyay afar ciyaarood oo keliya, iyadoo heerka gool dhalintiisa ee tartanka Yurub oo ah mid aad u adag ay tahay toddoba gool sagaalkii ciyaaroodba. Taasoo ah mid aad u sarreysa.
Caalami ahaan, weeraryahankaas ku dhashay Douala ee dalka Cameroon sanadkani uma wanaagsanayn.
Libaaxyada aan la loodin karin hoos ayay u dhacday ciyaarteedu koobka Qaramada Afrika iyo koobka adduunka labadaba iyadoo tababaraha Faransiiska u dhashay Paul Le Guen uu dhibaato kala kulmay xeeladaha ciyaarta, hase ahaatee Eto'o waxaa weli u suurta gashay inuu afar gool dhaliyo toddoba ciyaarood oo Angola iyo South Afrika lagu qabtay, inkastoo keligiis laga dhigay weeraryahanka ugu weyn kooxda Cameroon.
Si kastaba ha ahaatee, naadigiisu waxaa uu ka faa'iidaysanayaa in Eto'o uu ka mid noqday liiska ciyaartoyda laga soo xulayo laacibka sanadkan 2010 adduunka ugu fiican.
Samuel Eto'o waa inuu ku guulaysto abaalmarinta BBC ee ciyaartoyga Afrika sababtoo ah waa magac ciyaartoy jiilkiisa ah Afrika iyo adduunkaba aan weli loo aqoonsan.
Laakiin taasi waa arrinta ugu daciifsan ee riixaysa doodaha uu qabo qof reer Cameroon ah oo kartidiisa kubadda cagta oo dhan inta badan la dhayalsaday.
Bishii May, Eto'o waxaa uu noqday ciyaartoygii ugu horreeyay ee labo kooxood min saddex guulood u horseeda isagoo Inter gaarsiiyay inay horyaalka Yurub qaaddo, horyaal iyo koob-na ku guulaysato dalkeeda sanad kaddib markii uu sidaas oo kale u sameeyay kooxda Barcelona.
Siyaabo badan, horumarkaasi aad buu layaab u leeyahay maadaama Eto'o uu ka ciyaaray meel aan booskiisa ahayn oo ah weerarka baalasha, doorkaas oo hase ahaatee uu si aad u fiican uga soo dhalaalay.
Tababaranimada Benitez, libaaxa aan la loodin karin waxaa uu adduunka soo xasuusiyay xirfadihiisa gool dhalinta isagoo 14 gool ka dhaliyay 13 ciyaarood oo ka tirsanaa Serie A iyo horyaalka Yurub waqtiga qoraalkan la samaynayay.
Ciyaar xumada Cameroon ayaa ah sheyga keliya ee Eto'o u diidaya inuu ku guulaysto koobka, laakiin isaga ma lagu eedeyn karaa niyadjabka tababare Le Guen kala kulmay diiwaanka tartanka ee shan guuldarro oo lagala kulmay toddoba ciyaarood oo isugu jira koobka Qaramada iyo koobka adduunka.